Waxgaradka Magaalada Muqdisho oo Dusha u saariyay Masuuliyada Qaraxii shalay DKMG – SBC
Waxgaradka Magaalada Muqdisho oo Dusha u saariyay Masuuliyada Qaraxii shalay DKMG
Bulshada iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho xarunta Dalka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaraxii maalin nimadii shalay ka dhacay Magaalada kaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh.
Waxgaradka ayaa ku tilmaamay qarxaasi mid masuuliyadiisa qaadeyso xukuumada DKMG ah ee Soomaaliya maadaama ay iska xilsaari weyday sugista amaanka guud waa sida ay hadalka u dhigeene.
Aamino Aadan Cali waxa ay ka mid tahay Haweenka waxgaradka ah ee magaalada Muqdisho waxaana ay ka hadashay falkii shalay ka dhacay Tiraatarka magaalada Muqdisho iyadoona sheegtay in qaraxaasi uu ku yimid habacsanaan madaxda xukuumada ay ka sameeyeen dhanka amaanka.
waxa ay intaasi ku dartay in lagu tilmaami karo dowlada in ay ka dambeysay iyadu qaraxa, iyadoo soo qaadatay in Ciidanku ay celinayeen dadka la hubo ee ka shaqeynaya Amaanka sida saxafiyiinta iyagoo tusaya Aqoonsigooda, ayna siidaayeen dadkan geysanaya qaraxa
“Ninka Muwaadinka ah ee Wariyaha ah, wa nin meelwalba dhibaatadii ka dhacda u madax banaan, waad aragteen Albaabka ayay ka celinayeen ciidanka, qof qarax sidana waa gudbay” ayaa ka mid ahaa hadaladeedii aamino.
Sidoo kale Qaar ka mid ah Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa qaraxaasi dusha u saariyay Madaxda sar sare ee Xukuumada iyagoona u sheegay in habacsanaanta heysata dowladu ay sababtay falkan naxdinta leh.
sikastaba ha ahaatee Qaraxii shalay ka dhacay Xarunta Tiyaatarka Magaalada Muqdisho waxaa ku waxyeeloobay dad ka badan 10 qof oo inta la xaqiijiyay ay geeriyoodeen ku dhowaad 5 qof inkastoo ay jiraan dhaawacyada qaar ee la geeyay isbitaalada magaalada oo liita.